Musiyano uripo pakati peUnix neLinux, iwo akafanana here? | Linux Vakapindwa muropa
azpe | | Updated on 08/09/2017 15:03 | Zvimwe Linux
Unix neLinux hazvina kufanana, sezvo imwe yacho iri yehurongwa uye imwe iri yemahara software pakati pemimwe misiyano yakawanda.
Nguva pfupi yapfuura ndinoona yakawanda nyonganiso pakati peLinux neUnix, kubvira vanhu vazhinji vanotenda kuti zvakangofanana kana kuti imwe inoenderana neimwe, apo zviri pachena kuti haisi.
Iwe ungangodaro wakanzwa chirevo "linux haisi unix" kana chirevo chinodzokororwa cheGNU chinomirira "GNU Haisi Unix." Kare neichi chete tinogona kuziva kuti hazvina kufanana. Tichaenderera mberi nekutsanangura mutsauko mukuru uripo pakati pezviviri.
1.1 Unix mavambo
1.2 Linux mavambo
2 Kuva muridzi nekopiraiti
3 Kubatsira uye kushandisa
Yakazvarwa mukutanga kwema70 nevagadziri Ken Thompson naDennis Ritchie. Zvanga zviri yakagadzirwa paBell Labs, iyo iri yekambani inozivikanwa yeAT & T. Yakagadzirwa seinoshanda sisitimu yekugadzirisa maseva, iri sisitimu yekushandisa uko iyo mirairo inenge iine zvese mukurumbira.
Iyo Linux Kernel Yakagadzirwa naLinus Torvalds mukutanga kwema90's. Iyo kernel yakasikwa yakavakirwa paUnix naLinus yakave nerubatsiro rwevamwe emahara software ma greats saRichard Stallman. Kubva gore iro zvichienda mberi, akawanda maLinux-based distributions akatanga kugadzirwa, pamwe nematafura mazhinji.
Kuva muridzi nekopiraiti
Unix inova hurongwa hwekupokana husinga gadziriswe, chivakwa chekambani yeAT & T ndiyo yega ine mvumo yekuigadzirisa uye kugadzirisa.
Sezvo isu tese tichiziva, Linux iri pasi peGNU rezinesi uye nekudaro, iyo Linux kernel yakasununguka zvachose uye yakasununguka uye chero munhu anogona kugadzirisa kodhi yekodhi, iyo inowanikwa kune wese munhu.
Kubatsira uye kushandisa
Chinhu chikuru chinoshandiswa paUnix mashandisiro ayo pamaseva masisitimu, kunze kweMacOS X inoshanda system iriIyo desktop inoshanda system. Panyaya yemaseva masisitimu, iwo akaoma kuisa masisitimu anoshanda, masisitimu uko mirairo inokunda pamusoro peiyo graphical interface uye inoenderana chete neyakajeka Hardware. Mimwe mienzaniso ndeye AIS, HP-UX, kana Solaris.
Linux ine anoshanda masisitimu ese ari maviri maseva nevatengi. Mukati meLinux nyika kune zvakawanda zvakagoverwa, akawanda madhesiki uye akawanda maturusi akagadzirirwa ivo. Tine mienzaniso mizhinji, pane nyaya yemaseva isu tine masystem senge Red Hat kana SUSE Linux uye nenyaya yedesktop masisitimu isu tine Ubuntu, Linux Mint kana Debian.
Kunyangwe iyo Linux kernel yakavakirwa paUnix uye ivo vanogovana zvimwe zvinhu, zvatove takaona kuti pakupedzisira ivo vakasiyana sei. Zvinhu zvakaita seuridzi hwe software uye kubatsira kwemaitiro zvinoita mutsauko pakati pezviviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Musiyano uripo pakati peLinux neUnix
1. Linux haIYO inoshanda sisitimu pachayo. Iyo kernel (sekutaura kwawakaita, ini pakutanga ndakagadzirirwa Unix, ndichinyanya kunongedza Minix).
2nd. Izvo zvinonzwisisika kuverenga mukova unotaura nezveLinux uye kuti chete chirevo cheGNU chinoitwa chirevo chisina tsarukano uye chipfupi chinotaura nezve kudzokerwa kwezita rayo
3. Kutaura nezve Linux iri yemahara kodhi uye isingataure kuti pakutanga yakabuda pasi pechibvumirano chemvumo uye yakange isiri kusvika 1983 pakabvumidzwa rezinesi, panguva iyoyo apo chirongwa cheGNU chakagamuchirwa chakati kernel sekari, zvinoshungurudzawo kuverenga. (Ini handirangariri chaizvo kana yaive 1983. Kunyangwe kune vanoda kuziva ndinokunongedzera ku wikipedia)
Zvinondirwadza kuverenga kuti kuchine vanhu vakazvipira kufambisa kweGNU / Linux uye vachiri kutadza kunyora nemazvo sekudaidzwa kunonzi system yekushandisa.
Ndokumbirawo mufonere iyo penguin inoshanda sisitimu nezita rayo uye mira kusevha mavara mana isu tisiri pa twitter.
Kutaura kuti Linux inzira yekushandisa kwakafanana nekutaura kuti vhiri mota
Tsamba yacho haina kunaka. UNIX haisisiri yeAT & T, asi yeNovell.
Kunyangwe zvese zvauri kutaura zviri zvechokwadi, zvinoita kwandiri kuti uri kuomesa zvakanyanya uye pamwe unokwezva nevamwe vanonyanyisa kana kubatirira pakururama munhoroondo yezvakaitika, uye usingaone kuti pamwe chinangwa chetsamba chaingova tsananguro pfupi, pasina kuyedza kunyatsoongorora nyaya iyi, asi ingo cherekedza kuti kubva kwakatangira zita reGNU zvaitova pachena kuti zvakasiyana neUNIX
izvo ndezvechokwadi chaizvo uye ndizvo zvandanga ndichienda kune zvakadzama, kuti ndinyatso tsanangura, kubvira 2014 yakabva kuMicro Focus International iyo yakawana Novell muna 2014 uye Novell akashandisa iyo pfuma yehungwaru kuburitsa chigadzirwa cheUNIXWARE icho chaakachinja tsanga Unix
Iyo Linux kernel haina kubva paUnix kernel, asi i _ yakafanana ne_ Unix.
Pindura kuna AlexRE
IBM's Unix inonzi AIX, kwete AIS sezvazvinotaura muchinyorwa.
Pindura kuna Odo
Ini ndinofunga vanofanirwa kutsanangudza zviri nani musiyano uri pakati peGNU neLinux sezvo, sekutaura kweBlank, iyo sisitimu inoshanda inowanzo daidzwa kuti Linux kana ichingova tsanga yayo chete. Ini pachangu, kubva pane zvandinonzwisisa Linux yakaenzana neinjini yemota uye zvakadiniko nezvasara? chiri GNU?.
Nhoroondo nezve unix yaibva kuAt & T asi yakazotengeswa kuNovell uye ndokuzotengeswa kuSanta Cruz Operations (Iyo yakakurumbira SCO Unix iyo vazhinji vedu takadzidza) uye ipapo chiratidzo chakachinjirwa kuOpen Group, iyo inosimbisa makambani ane akasiyana shanduro dzeUnix, senge IBM, Apple, pakati pevamwe.
Ini ndinoda index, yechinyorwa chisingagari rinopfuura peji rimwe, asi ini ndaizotora chinyorwa chose kubva kwauri
Linus ... nzira yekushandisa
Ini handisi nyanzvi musumo, asi ... ko masystem eBSD? Haasi iwo emahara unix kana chimwe chakadai. Kune rekodhi, ini ndanga ndichipfuura nepano uye ndiri kutaura nezverunyerekupe, sezvandisingadaro ' t shandisa iwo masystem ini handinetse nekutarisa ruzivo pane iyo nyaya asi ndizvo zvandakanzwisisa.
Linux idombo reMinix iyo inozoita idombo reUnix ... iyo yaunoverenga haina kuita seiyi:
OSX yakafanana ne linux, kana imwe yacho isix, iwo ese ari maviri matombo, imwe iri Minix dombo uye imwe ichibva paMatch.
Kunyange Unix, asi ese ari maviri AKASANGANANA, https://es.wikipedia.org/wiki/Unix-like
Usati waita fungidziro dzakawanda kwazvo unofanirwa kuzvizivisa iwe zvakanaka, unokanganisa mazwi.
Panzvimbo pekutaura kuti "Linux ine masystem anoshanda ..", zvirinani kuti wati "Kune zvakagoverwa zvichibva paLinux ..."
Richard Stollman akadaro
Mukomana uyu anogara achinyora kubva mukusaziva, zvinyorwa zvake hazvichandishamisa.
Pindura Richard Stolman
Hongu ... chinyorwa chisina kujeka ... sezvavanochiisa chete sekuzadza
Ini ndinotsigira iko kunzwa uye kunzwa, asi iyo data, ini ndinokumbira kunyatso kurongeka. Ndatenda
Izvo zvaisazove zvakanyatsojeka kutaura zvekuenderana kana kwete pakati peUnix neLinux? ... Kana chikumbiro chakagadzirirwa Unix yakaiswa paLinux ... inomhanya here?
Franklin galindo akadaro
Suso inoita yakanakisa kutaurwa kune izvo chaizvo Linux.
Santa Cruz akagadzira yakangwara midziyo mhosva, nekuti kodhi yayo yakabiwa.
pane maviri akakosha pfungwa umo iwe unogona kunyatso kuzivisa iko kweiyo OS
1- Inofanira kunge iine yayo Kernel ... Linux haina iyo, haina kutanga kubva ku0, ndinotora minix base uye izvi zvichizoita izvo zveUNIX
2- Kufanana nezvose zvivakwa zvedzidzo, kubva kune kernel, mirairo, makomba, interface (ndinotaura zvakajairika kwete chete graphic) yakafanana neUnix, iko kwepakutanga kuri kupi?
Iwe unofanirwa kupa Cesar izvo zviri zvaCesar, ini ndinotora Microsoft semuenzaniso, Bill Gates akatora pfungwa yezviri kuitwa nevamwe kuvandudza OS yavo, akateedzera pfungwa yemirairo uye akatora muenzaniso wevamwe vazhinji. uye yekutanga yaive UNIX semuenzaniso manejimendi emitsetse yekudhinda, kuteedzera iyo pfungwa, kwete kernel, kana mirairo. uye iyo interface kune DOS haina kufanana neiyo imwe OS, unoona mutsauko here?
Icho chinhu chimwe kukopa iyo pfungwa uye kuisimudzira uye imwe kuba iyo kodhi.
Pindura kuna Franklin Galindo
chii chinyorwa njodzi.
Jill daniell akadaro
Hei, kana shamwari yako, ini ndoda kuziva zvaunofunga nezvenyaya yeaxpe ..., ndokumbirawo usasiya webhusaiti iyi pasina kusiya mhinduro yako, ichave yekubatsira kukuru, nekuti ndavhiringidzika nezve chimwe chinhu ...
Pindura Jill Daniell
Injodzi yakadii ... anotanga nekutaura kana kureva kuti Linus Torvalds ndiye mugadziri weGNU / Linux inoshanda system, apo yaive chirongwa uye chirongwa chekushandisa chakatangwa neDR. Richard Stallman kuti chete tsanga yakaitwa naTorvalds ndiyo yakashaikwa, asi musiki mukuru ndiStallman.
Vamwe vanyori vanoti iko kudzoreredzwa, nekuda kwekuti dhizaini yavo, mirairo ine zvakafanana, asi kana iri kodhi yekodhi inobata navo yakatosiyana, iyo isingatenderi maratidziro ekopiraiti.